Best Yoga nepanhovo nekuti vadikani zvose weyoga
Vose kugwinya freaks vanovimba nzira dzechinyakare kugara vadzidza vanoziva kukosha weyoga kwazvo. Yoga nezvei mamiriro ako, asi jooga asanas kuva kunyatsoenderana. Kana uchida kuwana kunonyanyisa abatsirwe yoga, unofanira nechokwadi kuti mamiriro ako zvakarurama. Kuti tiwane kodzero mamiriro uye kuitira kuti musana wako ngaatarire paunenge uchiita jooga asanas akarara pasi shure kwako, mumwe jooga bonde zvinobatsira chaizvo.Kana iwe uri kuvhiringidzika kana uchida kuva jooga bonde kana yaunofanira kutenga rukukwe, tine mhinduro kwamuri. Hezvino zvimwe zvikonzero nei uchifanira ndorwangu mumwe, mhando weyoga nepanhovo uye zvakanakisisa ndivo yaunofanira nonga: -
Sei Yoga bonde zvakanaka here?
A Yoga bonde kunoita iwe rako pachako weyoga nzvimbo. Kana uri kudzidzira jooga panzvimbo yavose park, kutsanangura nzvimbo yako tichibatsirwa pabonde kunodzivisa ruzhinji kupindira kuti nzvimbo uye unogona kuita kuti yoga pasina chinhu vachivavhiringidza.
It rinoumbwa ane Anti-skid zvinhu. Saka kuchakudzivisa dzisatsvedza nokuda ziya kunoisa mukukuvara zviduku apo kuita weyoga asanas
A Yoga bonde pachagara shamwari yako uri kuchinaya mangwanani. Dai kwanaya usiku hwose uye wako patsangadzi uswa iri nyoro, achiita jooga kunyatsonzwisisa jooga nepanhovo hauzoregi iwe mberi jooga yako pasina kuwana dzanyorova.
Types weyoga nepanhovo
Sticky Yoga nepanhovo
Ava Anti-skid jooga nepanhovo kuti zvakanaka kuti beginners vasina zvakawanda kudzora muviri wavo apo vachiita weyoga asanas. Ivo kunyange zvakanaka vaya ziya zvakawanda kuitira kuti havasi kutedzemuka.
Travel Yoga nepanhovo
Ava chiedza uremu uye nyore shangu kuitira kuti unogona muvatakure newe kwose kufamba. Zvisinei, havasi zvakanaka kushandiswa daily.
Natural rabha Yoga nepanhovo
Nokuti vaya vanoda kuderedza mupiro yavo vakananga kushatiswa kwezvakatipoteredza, izvi jooga nepanhovo vari vakakwana. Sezvo vari vakaita dzinongoitika zvinhu, nepanhovo izvi vakachengeteka nokuti vanhu vane tisanzwe ganda.
Jute Yoga bonde
The Tsika Yoga nepanhovo zvinoshandiswa kuitwa jute nokuda dzinongoitika zvikuru zvinoriumba. Havasi saka yakasimba asi achava nesarudzo yakanaka kana muchitsvaka mari-anobudirira nezvechisarudzo
Cotton Yoga bonde
Ava akagadzirwa gobvu donje jira uye zvakanaka avo vanoda kugeza zvavo ose zvino uye ipapo. Zviri zvakare mari-inobudirira chisarudzo nezvacho.